Bam Gacmeed lagu weeraray saldhiga Booliska Kisauni magaalada Mombasa (Video )
December 3, 2012 - Written by
Mombasa:-Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Mombasa ayaa sheegaya in bam Gacmeed lagu weeraray saldhiga Booliska degaanka Kisauni magaalada Mombasa waxaana weerarka uu sababay khasaaro kala duwan. Goobjoogayaal ku dhawaa saldhiga Booliska degaanka Kisauni ee magaalada Mombasa ayaa u sheegay warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Kenya in ay arkeen laba askari oo dhulka yaala iyo gaari kuwa gargaark ah oo qaaday dhaawaca.
Askarta ku sugneyd saldhiga Booliska ee degaanka Kisauni magaalada Mombasa ayaa furay rasaas badan waxaana weerarka lagu qaaday caawa ciidamada Booliska ee magaalada Mombaza xaqiijiyey taliyaha saldhigaas G/sare Julius Wanjohi
Taliyaha saldhiga Booliska ee degaanka Kisauni magaalada Mombasa G/sare Julius Wanjohi ayaa saxaafada u sheegay in raga weeraray Saldhiga ay iska dhigeen rag dacwo qaba ka dibna markii ay Booliska u soo baxeen ay Bamka ku weerareen ka dibna ay baxsadeen .
Taliyaha saldhiga Booliska ee degaanka Kisauni magaalada Mombasa G/sare Julius Wanjohi ayaa u sheegay Bamka lagu weeraray saldhiga in uu ahaa petrol bomb uuna ku dhaawacmay hal askari.
Magaalada Mombasa ayaa caawa waxaa lagu daadiyey ciidamo Boolis ah kuwaas oo baaritaano ka wada degaanka Kisauni lama oga ilaa haatan cid ay qabteen.